Kuongorora kweiyo iPhone 11 Pro Max: Apple inotipa izvo zvatakakumbira | IPhone nhau
Luis Padilla | | iPhone 11, dzakawanda
Paive nekunzwa kuti nguva pfupi yadarika iyo iPhone yanga ichisarira kumashure mune mamwe maitiro akakosha. Kune vazhinji yaive foni ine yakanakisa zvibodzwa, asi haana kupedzisa kukunda mune akakosha mapoinzi sekutora mifananidzo kana kuzvitonga, nevakwikwidzi vanomaka misiyano uko pamberi peiyo iPhone yaitonga pasina matambudziko.
Kune simba re processor yayo, yakasikwa-yakagadzirirwa software uye yayo yakanaka skrini, zvinhu uko Apple isina kumbobvira yakundikana, vashandisi vaida kuwedzera kamera inogona kukwikwidza zvakanakisa pamusika, uye kuzvimiririra kwakazotitendera kuti tisiye majaja kumba pasina kunetseka. Gore rino Apple yatiteerera, uye mhedzisiro yacho ndiyo iPhone 11 Pro Max.
1 Kuratidza kamera
2 Inorema, yakanyanya, yakawanda bhatiri, ine simba
3 XDR kuratidza: rimwe lime, rimwe jecha
4 Iyo kamera inoita mutsauko
5 Mubati wenhamba 1
Apple yasarudza gore rino kuti itipe isu inoenderera dhizaini. Gore rino kwaive kutendeuka kwemamodeli pasina "S" izvo zvinowanzoreva shanduko dhizaini, uye zvave zvakadaro ... kanenge hafu. Kana iwe ukatarisa kumberi, yakafanana neiyo XS Max, yakatangira iyo, asi kumashure kwakasiyana. Hapana imwe yemamodeli ataona mavhiki ese aya pamberi pekuburitswa kweiyo iPhone yabudirira. Zvairatidzika kunge zvakaoma kutora iyo module ine matatu zvinangwa kuti utaridze zvakanaka mu smartphone iyo yaigara ichizvikudza nezve dhizaini yayo, asi ivo vakabudirira.
Girazi rekuseri iro rine matte nyowani, sekunge raive girazi rinochinja, riine grey kudarika giravara dema, uye neApple logo iri pakati pechigadzirwa. Apple yabvisa iwo anotyisa silkscreens kubva pasi, uye kumusana uko isu tinongoona iyo yakarumwa apuro, nekuti zvinopera pasina kutaura kuti iri iPhone, inoonekwa neziso rakashama. Iyo matte yekupedzisa zvakare ine yakasarudzika mameseji ayo zvinoenderana nevamwe anopa ari nani kubata, asi izvo ini handisi kunyatso kujekesa nezvazvo. Izvo iwe zvaunogona kuudza ndezvekuti iyi matte pamusoro haina kunyanyisa kutarisana neminwe. Apple inoti mahwindo epamberi nepamberi ndiwo akaomesesa pamusika, nhau dzakanaka kwazvo.
Sezvatakambotaura, mamodheru akauya kwatiri pamberi pekuburitswa kweiyo iPhone nyowani anga asiri echokwadi, uye zvaingova nekuti ivo vakatanga kubva pasirizvo fungidziro: kuvanza module yemakamera. Apple haingoyedze chete kuiviga, inowedzera mukugadzirwa kwayo. Girazi rekuseri rinomira kuve matte kuti ripenye, uye zvakare ine rakapfava rakamonyoroka iro rinowana openyera mhedzisiro inoita kuti usahadzika kana ichinyatso kumira kana ingave iyo inopesana. Iwo maalensi matatu anomirawo, akakomberedzwa nemhete nhatu dzesimbi muvara rimwe chete seiyo iPhone.
Inorema, yakanyanya, yakawanda bhatiri, ine simba
Iyo nyowani iPhone 11 Pro Max yakora uye inorema. Iko shanduko mukukora haina basa, chete 0,4mm kupfuura yaakatangira, asi huremu hunoonekwa kana uine iPhone XS Max mune rumwe ruoko uye iyo iPhone 11 Pro Max mune imwe (18 gramu mutsauko). Mushure megore neXS Max yangu, kunzwa kwekutakura iyo nyowani 11 Pro Max muhomwe yako kwakanyatsofanana, asi kana uchiuya kubva kune chidiki chinhu, senge XS, X, kana kunyangwe kana iwe uchibva kune mamwe mamodheru, unozviona. Ndiwo mutengo watinofanira kubhadhara kuti tikwanise kunakidzwa nekumwe kuvandudzwa kukuru kweiyi 2019 modhi: yakakura bhatiri.
Iko bhatiri kugona kweiyi nyowani iPhone yakawedzerwa ne25%, ichisvika 3.969mAh. Kana isu tikawedzera kune ichi chinyowani chinobudirira screen uye processor kunyangwe iko kugadzirisa kwakagamuchirwa, muhuwandu Apple inovimbisa kuti iyo iPhone 11 Pro Max ine maawa mashanu ekushandisa zvakanyanya kupfuura ayo akaitangira. Mumaawa angu ekutanga makumi maviri nemana ekuyedzwa, uye uchifunga kuti iko kushandiswa kwave kwakakwirira kupfuura kwakajairwa, kusvika 24% pakupera kwezuva rakanyanya kubudirira. Tichaona kana nemuenzaniso uyu ini ndinopedzisira ndave kuda Smart Battery Case, nekuti izvozvi handifunge. Nenzira, yatove inosanganisira iyo 18W inokurumidza charger uye iyo USB-C kune mheni tambo.
XDR kuratidza: rimwe lime, rimwe jecha
Chidzitiro cheiyi iPhone nyowani chiri nani, pasina mubvunzo chiri nani, uye izvi zvichanyatso kuve zvichazivikanwa neDisplayMate mushumo watichakurumidza kuburitsa. Iyi nyowani "Super Retina XDR" inoratidza (hapana rutsigiro runodiwa) inochengetedza saizi yayo (6,5 "), resolution uye pixel density (458ppp). Asi inowedzera musiyano kaviri (2.000.000: 1) uye ine kupenya kwakanyanya kwema1200 nits, kunyangwe ichingoshandiswa pane ino yepamusoro kana tichifarira zvemukati zveHDR.
Nekudaro, Apple yakasarudza kubvisa chikamu chechiratidziro icho vazhinji vedu tave kujaira, uye izvo zvinokupa unovhiringidza kunzwa paunotanga kushandisa yako nyowani iPhone. Kubvisa iyo 3D Kubata kunoreva kudzikisa hukobvu hwechidzitiro uye nekudaro uine yakawanda nzvimbo yebhatiri (yechipiri kubhadhara yataifanira kuita), uye Apple yakachinja iyo yeHaptic Touch, iyo isingade imwe yekuwedzera Hardware, inoshanda chete ye software. Izvo zvaimbove "kudzvanya zvakanyanya" izvozvi "chengeta kwenguva refu", uye izvo zvinoda nguva yekugadzirisa. Kushandisa iOS 13 kubva munaJune kwakandibatsira kuti ndichinje kuchinja, asi kunzwa kwakasiyana neya XS Max yangu, uye ndechimwe chinhu chiri kundinetsa izvozvi, kunyangwe ndine chokwadi chekuti mumavhiki mashoma ndinenge ndakanganwa.
Tichitora mukana wekuti isu tiri kutaura nezve iyo skrini isu tichataura mashoma mazwi nezveFaceID, inoitisa yakakurumbira "notch" sekushoropodzwa sekuteedzerwa. Chiso cheApple chekucherechedzwa kwechiso chakati kurumidzei, asi nekukurumidza kupfuura chimwe chinhu chatokurumidza, saka haugone kuzviona kunze kwekunge uchizvienzanisa neimwe modhi. Izvo zvandisina kucherechedza ibasa rakakura rekuita, uye zvakadaro harisi kushanda rakatwasuka. Kunyangwe paine zvipingamupinyi zvidiki izvi, ini ndichiri kuzvifarira pamusoro peTouch ID, pasina kusahadzika kushoma.
Iyo kamera inoita mutsauko
Icho chinhu chinoita musiyano muhombe uchienzaniswa nemamodheru apfuura, pasina mubvunzo, kamera. Iyo lenzi katatu inosanganisira yakakura kona uye telephoto lens, semakore apfuura, uye zvakare inowedzera iyo yakafara yakafara kona:
Yakakura Angle - ƒ / 1,8 - 100% Focus Pixels - 12Mpx
Telephoto - ƒ / 2 - 100% Focus Pixels - 12Mpx
Yakakura Wide Angle - ƒ / 2,4 - 120º - 12Mpx
Pamusoro pekuvandudzwa kwehardware, Apple yakavandudza iyo Smart HDR system, imwecheteyo gore rapfuura yaive muzinda wekupokana kwe "kunaka kwekuita" nekuda kwetsika yekunyorovesa mifananidzo. Gore rino nyaya yacho yachinja, uye iwo ruzivo runoonekwa mumifananidzo, kunyangwe neiyo Smart HDR modhi yakaitwa, yakakura kwazvo. Portrait mode inoenda nhanho imwe kuenda kumberi, uye kunyangwe iyo yekumashure kusviba kusakwana kuchiri kuoneka kana kumberi uye kumashure zvisina kunyatso kusiyaniswa, kuvandudzwa kweterevhizheni lens uye kugona ikozvino kutora mifananidzo nekona yakafara (iyo yakanakisa lens yevatatu) inoita kuti mhando yemifananidzo ive yepamusoro.
Manheru Manheru 1s
Yakareba angle Smart HDR
Yakakura Angle Smart HDR
Manheru Manheru 2s
Asi nyeredzi yekamera nyowani ndiyo nyowani Night Mode. Apple yaisanganisira iri basa, ratovepo mune hukuru mafoni emakwikwi, asi zvakuita kuve kwechokwadi kune ayo maitiro. Mifananidzo yacho haina kupenya senge iyo iwe yaunogona kuwana nePixel kana Samsung, nekuda kwekuti ndezvechokwadi. Apple haidi kutipa pikicha ine mavara, inoda kutiratidza chokwadi nekutendeka sezvinobvira, uye uchifunga kuti iyo Night Mode pachayo yatove nehunyengeri hwechokwadi, zvirinani inozviita nenzira inoremekedzwa kwazvo inogoneka. Iyo nhanho yedudziro mumifananidzo iyo iwe yaunogona kuwana neiri basa inoshamisa.
Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti haufanire kunge uri nyanzvi yekutora mifananidzo kuti uishandise, nekuti inogadziriswa otomatiki kana iwe waona kuti mamiriro emwenje haana kunaka, uye kana uchida, unogona kugadzirisa nguva yekuratidzira (kusvika 3 masekondi) kana kuisiya otomatiki kuti iyo iPhone isarudze yakanakisa sarudzo. Kana ikaona kuti iwe uri patatu, nekuda kweiyo accelerometer, iyo inokutendera iwe kuti uwedzere iyo yekuratidzira nguva kusvika kumasekondi makumi matatu!. Unogona kuishandisa kuti uwane mafambiro ekufamba pamafoto ako, sezvakangoita zvayakanakira.
Iko kusanganisa kweiyo yakasara yakafara kona, pamusoro pekukupa iwe mukana wekuti zvirinani kutora mifananidzo yenzvimbo nenzvimbo dzakashama, kana kutora zviitiko zvine zvisingaonekwe maonero, zvinogonesa chinonakidza chiitiko kune avo vane tsika yekucheka vanhu mumifananidzo. Paunenge uchitora pikicha iwe une sarudzo yekuve neyekupedzisira kona yakatarisa otora imwe, iine yakakura nzvimbo yekuona, uye kuti ugone kuitazve gare gare mufananidzo kana chimwe chinhu chakasiiwa kunze. Iyi sarudzo yakaremara nekutadza. Asi mumamiriro ezvinhu emwenje akashata, zvirinani kanganwa nezvazvo nekuti zvinoratidza kuti ndicho chakanyanya kunwisa chevatatu.
Kunyangwe uchienzanisa iwo mapikicha ePohne XS Max, ine kamera yakakura uye neiyo Smart HDR modhi, misiyano iri pachena kupfuura. Uye ini handisi kungotaura nezvechiedza, asiwo hudzamu hwezvakatorwa. Mavara anochengetwa, mashizha emiti anoonekwa, pamwe nemabhuru emadziro echechi huru, chimwe chinhu icho mumifananidzo yeXS Max chisingaitike. Mifananidzo iyi yese inotorwa isina katatu, yakabata yangu iPhone nemaoko maviri, uyezve pasina kubatazve chero chinhu. Uye isu tichiri kufanira kuziva kuti chii chichaitika kana Deep Fusion ficha yasvika, iyo inofanirwa kugadzira mapikicha zvirinani, asi izvo zvatisingazoone kusvikira izvi zvawira paPhones nyowani.
Panyaya yevhidhiyo, iyi iPhone nyowani inowedzera mutsauko nemakwikwi, ayo anga atove makuru. Iyo inovandudza kugadzikana, uye ese malenzi ayo anokwanisa kurekodha 4K 60fps vhidhiyo. Iwe unogona kunyange kuchinja lens, kuwedzera kana kudzikisa zoom, ehe, nguva dzose ne4K 30fps mhando uye yakaderera. Iyo iPhone inosarudza yega lens yakakodzera kwazvo kune iyo zoom yaunosarudza, uye kunyangwe mamwe madiki "akasvetuka" achionekwa kana achichinja lenzi, mhedzisiro yacho yakanaka chaizvo.
Hatikwanise kukanganwa iyo yekumberi kamera, iyo inokwira kusvika 12Mpx (ƒ / 2,2) uye inokwanisa kurekodha vhidhiyo mu4K fomati pa24 / 30/60 fps, ine Smart HDR uye iyo nyowani "Slofies", inononoka kufamba vhidhiyo selfies iyo ichakurumidza kufashamira Instagram nyaya nezvimwe zvakadaro. Kunyanya kutaurwa kunofanirwa kuitwa kweiyo nyowani yeKamera kunyorera yevatatu iPhone 11 mamodheru, iine mamwe maturusi uye inovandudzwa interface, iyo yatinozoongorora gare gare mune imwe vhidhiyo.
Mubati wenhamba 1
Iyo nyowani iPhone 11 Pro Max inoshuvira kuve nhamba 1 mune angangoita ese mapoka, nekuti yaisafanirwa kunge yakamira kuve. Kamera isingade mafireworks kana hunyengeri kuti uwane mibairo inoshamisa, bhatiri rinokupa iwe maawa mazhinji ekushandisa, simba risingaenzaniswi renguva dzose uye dhizaini yakanaka kwazvo. Pachagara paine avo vanoti haina 5G kana kuti chinongedzo hachisi USB-C, mbiri mbiri dzinogona kuzopedzisira dzasvika munguva pfupi iri kutevera, asi izvo hazvishande kuvhiringidza chishandiso chegumi. Chisingaregererwe ndechekuti "Pro" chishandiso chinodhura € 1259 chinotanga pa64GB yekugona.
Yakasarudzika, chaiyo kamera ine yakanakisa vhidhiyo
Kuzvimiririra kwezuva rese
Inosanganisira 18W inokurumidza charger
64GB bhuti kugona
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » IPhone 11 Pro Max ongororo: Apple inotipa izvo zvatakakumbira
Iwe unongofanirwa kuona wongororo dzeYoutubers saMarquees Brownlee kana Everythingapplepro uye unoona marondedzero avanoita kuvandudzika pachiratidziri kana iyo inofungidzirwa iri nani FaceID se "isingabvumike". Mushure mekuita bvunzo mune dzakawanda zviitiko vanozvitsanangura sekunyanyisa. Unogona kuona bvunzo dzekudonha uko gore rino maPhones anotyora kare. Asi hei, imi mose uye rimwe rinozivikanwa bhurogu remaapuro kuSpain muri kuzondikurudzira kuti imhanho huru kana ichienzaniswa negore rapfuura. Kana Apple isingade kuvandudza. Kuti?
Pindura kuna Asier
Handizive kuti ndeapi maMarques ongororo awakamboona ... asi wera iyo skrini seinonakidza, pachokwadi ndicho chakanakisa skrini pamusika izvozvi: https://www.actualidadiphone.com/el-iphone-11-pro-max-tiene-la-mejor-pantalla-del-mercado/
Kana iri bvunzo yekudonha, ini handizive zvawaona futi, nekuti muyedzo iyi vanomira asi zvakanyatsonaka:
Asi hei, iwe ramba uchitenda waunoda, ini handidi kuitisa chero munhu.
Pandakaona zita rekuti "Apple inotipa izvo zvatakakumbira" ndarega kuverenga, nekuti zviri pachena kuti iyi iPhone nyowani haina 5G, zvinova ndizvo zvatakakumbira.
Ehe, ichi chinhu chinonyanya kubatsira munyika dzakaita seSpain uko kufukidzwa kwazvino kuri 0%.
Chinjana ruzivo rwese kune yako nyowani iPhone neAllTrans